, थाहा पाउनुहोस्, महिलालाई यौन चाहना कुन समयमा सबैभन्दा बढी हुन्छ ?
महिलालाई यौन चाहना कुन समयमा सबैभन्दा बढी हुन्छ ?
96500 पटक पढिएको
एजेन्सी । अध्ययनका अनुसार,महिलाहरुमा महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म यौनसम्बन्ध राख्दा उनीहरूलाई बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
यौन विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौनको ‘मुड’ मा बढी हुन्छ । महिनावारी पूरा भएपछि यौनका लागि उत्तेजित गर्ने हार्मोन सक्रिय हुन्छ । अनुसन्धाताहरूले त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महिनावारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवासले बढी रमाइलो अनुभूति दिन्छ ।
यौन चाहना तीव्र हुँदा कुनै पुरुषसँग यौनसम्पर्क राखूँ कि जस्तो लाग्छ !
थाहा पाउनुहोस्, महिलालाई यौन चाहना कुन समयमा सबैभन्दा बढी हुन्छ ?